Seefta Dulmi Jadiid oo qaaday Halgamayaal caana- Yaase lagu bedelay?
08 March 2013 Waagacusub.com- Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow ayaa markii ugu horeeysay si rasmiya xilka uga xayuubiyay Taliyahii Ciidamadda Xooga Dalka Soomaaliyeed Jeneral Diini iyo Abaanduulaha Ciidanka Xooga dalka Jeneral Dhegabadan.
Madaxweyne Hassan Alasow ayaa Taliyaha Ciidanka xooga dalka u magacaabay Jeneral Afqarshe oo u dhashay beesha Sheekhaal kana tirsan Urur diimeedka Damu Jadiid,sida Waagacusub ogaatay. Jeneral Afqarshe wuxuu sanado badan ku noolaa dalka Canada.sidoo kalena ninka ku xigeenka looga dhigay oo lagu magacaabo Jeneral Cabdirisaaq wuxuu ahaa Sarkaalkii horkacayay CIidan beeleedkii difaacayay xulufadii Jeneral Siyaad Barre dagaalkii Buurdhuube ,wuxuuna u dhashay beesha Mareexaan.
Saraakiil ka tirsan Ciidamadda xooga dalka Somalia ayaa sheegay in xilka qaadista Diini iyo Dhegabadan looga gol leeyahay in la hakiyo dagaalka lagu wado Al-Shabaab maadama Ciidamadu niyad jab xoogan ku dhacay.
Jeneral Dhega badan wuxuu ahaa tiirdhexaad isku xiri jiray Ciidamadda Xooga dalka ,wuxuuna sabab u noqday guulo lagu tilaabsaday.
Astaanta lagu xasuusto Jeneral Dhegabadan waxay tahay GEESI AAN CABSI AQOON,wuxuuna ahaa niyada Ciidanka iyo Saraakiisha .
"Waxaan tebi doonaa Sheekh Shariif,Jeneral Diini iyo Dhega badan"ayuu yiri Sarkaal sare oo Waagacusub la hadlay xilli indhahiisa ka muuqatay oohin.
Si kastaba ha ahaatee, Halgamayaashii Shabaab ka xoreeyay inta badan goboladda Somalia waxaa qaaday SEEFTA DULMI JADIID.